Raw (R) -Oxiracetam poids (68252-28-8) mpanamboatra - Phcoker
SKU: 68252-28-8 Sokajy: Drug Smart
Raw (R) -Oxiracetam poopy (68252-28-8) video
Row (R) -Oxiracetam dia ny (R) -enantiomera amin'ny odytopika oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) dia zava-mahadomelina avy amin'ny fianakaviana racetam ary fankaherezana. Ny valan'aretina IC50: Target: drug nootropic Oxiracetam (ISF 2522) dia zava-mahadomelina avy amin'ny fianakaviana racetam sy ny fomba fanentanana.   Ny fikarohana biby maromaro dia milaza fa ny fiantohana dia azo antoka na dia levona be aza ny dosie mandritra ny fotoana lava . [Ny fitsaboana ilaina] Na izany aza, ny sehatry ny hetsika ataon'ny fianakaviana racetam dia mbola resaka fikarohana. Oxiracetam dia tsy ankatoavin'ny Fitondrandraharahan'ny sakafo sy ny fitsaboana amin'ny fampiasana fitsaboana any Etazonia.
Raw (R) -Oxiracetam poids (68252-28-8) Specifications
Product Name Raw (R) -Oxiracetam poids
Anarana simika Raw (R)-Oxiracetam powder;68252-28-8; (R)-2-(4-HYDROXY-2-OXOPYRROLIDIN-1-YL)ACETAMIDE;
Drug Class Tsy misy angona azo ampiasaina
molekiolan'ny Formula C6H10N2O3
molekiolan'ny Wvalo 158.16
Boiling Point 494.6 ° C amin'ny 760 mmHg
Ny antsasaky ny biolojia Tsy misy angona azo ampiasaina
Solubility Votoatiny amin'ny DMSO
Storage Temperature Mangatsiaka, mainty ary 0 - 4 C mandritra ny fotoana fohy (andro na herinandro) na -20 C mandritra ny fotoana maharitra (volana sy taona).
Application Open book 01.svg Anarana iombonana [[sokajy: Endrika: myv]] [[Catégorie: Anarana iombonana amin'ny teny Endrika: myv]]
Raw (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) Description
Row (R) -Oxiracetam dia ny (R) -enantiomera amin'ny odytopika oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) dia zava-mahadomelina avy amin'ny fianakaviana racetam ary fankaherezana. Ny valan'aretina IC50: Target: drug nootropic Oxiracetam (ISF 2522) dia zava-mahadomelina avy amin'ny fianakaviana racetam sy ny fomba fanentanana.   Ny fikarohana biby maromaro dia milaza fa ny fiantohana dia azo antoka na dia levona be aza ny dosie mandritra ny fotoana lava . [Ny fitsaboana ilaina] Na izany aza, ny sehatry ny hetsika ataon'ny fianakaviana racetam dia mbola resaka fikarohana. Oxiracetam dia tsy ankatoavin'ny Fitondrandraharahan'ny sakafo sy ny fitsaboana amin'ny fampiasana fitsaboana any Etazonia
(R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) Mekanisma amin'ny asa
(R) -oxiracetam, dia ny famokarana mahomby izay nanamaivana ny fahasimbana eo amin'ny fianarana sy ny fahatsiarovan-tena amin'ny alàlan'ny fanimbana ny fahasimban'ny neuron sy ny lozam-pifaneraserana amin'ny fototarazo, ny fitomboan'ny rà mandriaka, ary ny famindrana ny astrocyte fanafody amin'ny ratositra mihosin-dabozia.
soa of (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8)
Fifantohana sy fifantohana
Mihamafy ny fahalalahana miteny
Mahaiza mandanjalanja ary mampahery ny mahatsiaro
soso-kevitra (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) Dosage
Ny dosage ny oxiracetam dia ambany noho ny an'ny piracetam, saingy tsy midika izany fa ampy ny vola kely. Ny dosage mahazatra dia eo anelanelan'ny 1200 mg sy 2400 mg nalaina nandritra ny iray andro, na roa ka hatramin'ny telo dia nanaparitaka ny fotoana famoahana (toy ny telo doses an'ny 400mg na 800mg).
Side effects of (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8)
Oxiracetam dia mety hiteraka aretina. Mba hialana amin'ny kanseran'ny oxiracetam, dia makà ampidirina choline toy ny alpha GPC na citicoline.
Noho ny fananana toetra marefo, ny oxiracetam dia mety hanelingelina ny cybercine norma raha toa ka tara loatra ny andro.
Ny voka-dratsin'ny tsy fahitan-tory sy ny alahelony, raha tsy fahita firy, dia notaterina indraindray. Ireo vokatra ireo dia azo alaina amin'ny ankapobeny amin'ny fandefasana oxiracetam ny andro na fampihenana ny dosage.
GM1 dia nampiasaina betsaka mba hanasitranana ny aretina azo avy amin'ny ati-pandehan'ny nify, ny Parkinson, ...
Vola Hydrafinil (9-Fluorenol) roahina (1689-64-1)
Ny vovo-dronono Hydrafinil dia anônônaly mahery vaika fanampiny momba ny Modafinil. Hydrafinil, fantatra koa ...
Ny PRL-8-53 dia fikarohana momba ny fikarohana avy amin'ny seza benzoika sy ny phenylmethylamine miaraka amin'ny vokatra tsaratsara kokoa .......